linux တွေမှာ ISA လိုမျိုး proxy server ရှိလား — MYSTERY ZILLION
မူလ › Linux/Unix
linux တွေမှာ ISA လိုမျိုး proxy server ရှိလား
June 2008 edited July 2010 in Linux/Unix
လင်းနစ်တွေမှာ ISA လို proxy server software တွေရှိလားခင်ဗျား
လင်းနစ် server က နေ clients တွေကို internet share လုပ်ချင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့...
သူ့ဆိုရင် software မလိုဘူး ထင်တာပဲ... ကျွန်တော်တို့ဆီမှာဆိုရင် free bsd နဲ့ သုံးထားတယ်....
.conf file တချို့ကို ပြင် လိုက်တာပဲတွေ့ရတယ်...
ကျွန်တော် အခု စမ်းသုံးကြည့်တာက SUSE 10 enterprise edition ပါ အဒီ၀င်းဒိုးကနေ တစ်ခြား ကွန်ပျူတာတွေကို အင်တာနက် ခွဲေ၀သုံးခိုင်းချင်တာပါ.....ဒီမှာက UBUNTU ခေါင်းစဉ်ပဲပါတော့ ဘယ်လိုမေးရမလဲမသိလို့ လင်းနစ်ပဲ ခေါင်းစဉ် တတ်လိုက်တာ.....khunmk ပြောတဲံ့ .conf file တွေမှာ ဘယ်လိုပြင်ရသလဲခင်ဗျား...ပီးတော့ ဘာတွေ ထပ်သွင်းဖို့လိုသေးလညး်ဆိုတာလည်းပြောပေးပါလား..........ကျေးဇူူး khunmk
June 2008 edited June 2008 Moderators
tayzar.light wrote: »
1. first of all, နက်ဝပ်ကဒ် ၂ခုလိုမယ်။ 1 for outside(connected to internet) and 1 for inside lan(to Hub),
2. should already assigned IP Address for each, outside interface IP can be from DHCP.
inside interface shouldbstatic IP address like 192.168.1.1
aTxIvG4001 wrote: »
ကျွန်တော် အခု အဒါတွေကို ဆင်ပီးပါပီ...........client တွေကိုလည်း server ကနေလညး်သိပါပီ....
ဆာဗာမှာလညး် အင်တာနက် သုံးလို့ရနေပီး client တွေကို ဘယ်လို အင်တာနက် share ဘယ်လိုပေးရမလဲ.....ကူညီပါဦး......
3. then there is2ways of internet sharing,
- 1 - with iptables
-2- proxy server like squid
which one do u want to choose?
there is advantages and disadvantages for each
1. for iptables,
its forward everthing, not cache, clients no need to set proxy setting, like 192.168.1.1 8080
2. for proxy server,
its only forward web traffics like http and https, and its cached,
its mayba bit faster then iptables for most use sites.
ကျွန်တော်သိချင်တာက proxy sever နဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့ အကြောင်းလေးပါ။။။ဘာလို့လညး်ဆိုတော့ သူက iptables ထက် နည်းနည်းပိုကောင်းမယ် ၊ပို မြန်မယ်ဆိုတော့ သူနဲ့ ချိတ်ဆက်ပုံလေး သိပါရစေ..........
ပြီးတော့ ISA မှာလို cached လညး်သူမှာ ထားလို့ရလား...............ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလည်း.....
4. can you use yum to install applications? if so, pls install squid with this command.
yum -y install squid
ရပီ ကျွန်တော် squid ကို install လုပ်လိုက်ပီ............
သူက root home \_ etc\_ squid ဆိုတဲ့ folder လေး ဆောက်ပေးတယ်
အဒီမှာ ဖိုင်လေတွေ တွေ့တယ် khunmk ပြောသလို .conf ဖိုင်လေးတွေ တွေ့တယ်ဗျ
5. pls find /etc/squid/squid.conf and if possible pls attach or paste here.
I will update and will send back to you and i will tell you what i changed or added.
6. let me know your2ip address facing to internet and facing to local hub.
6.1 if possible, let me know which proxy port you want to configure (like 8080) and your computer hostname (you can find out by hostname command)
ကျွန်တော် local ip က 192.168.10.22( server) ကျန်တာက 192.168.10.1 to5က clients ip တွေပါ။ အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်ဖို့ကတော့ အိုင်ပီက အော်တိုယူတယ်ထင်တယ်....ကျွန်တော့် server hostname က tayzarlight ပါ......
internet proxy ကတော့ 203.81.72.200 ကို သုံးပါတယ်
squid .conf ဖိုင်လေးထဲက စာတွေ ကို paste လုပ်ပေးမလို့ပါ ဒါပေမယ့် စာတွေက တအားများနေတယ် အဒီ squid .conf ဖိုင်ကို ဒီနေရာ မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်...
ကို tayzar မင်္ဂလာပါ..ဗျာ....
ကျွန်တော်လဲ squid အကြောင်းစိတ်၀င်စားတယ်...
ကျွန်တော်တောင်ပေါ်ဒေသကပါ ကို ice ရေ........... ကျွန်တော်လညး်စမ်းတုန်းဗျ....atxIVG4001 ကို မေးပီး....အခုလညး်သူတောင်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ တင်ထားတာ သူ အဖြေကို စောင့်နေတာ .....squid.conf မှာ ဘယ်လိုပြင်ရမှာလို့......
internet proxy ကတော့ 203.81.72.200 ကို သုံးတယ်ဆိုတော့ parent proxy ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။ port no ကို ကျနော် 8080 ဆိုပြီးလောလောဆယ်ထည့်ထားတယ်။ မဟုတ်ရင် ရှာပြင်လိုက်ပါနော်။
7. backup your /etc/squid/squid.conf
8. overwrite the whole file with the following
#  TAG: http_port
#  TAG: visible_hostname
#  TAG: cache_peer
cache_peer 203.81.72.200 parent 80800no-query no-digest
#  TAG: hierarchy_stoplist
#  TAG: no_cache
#  TAG: auth_param
#  TAG: refresh_pattern
refresh_pattern ^ftp:        1440    20%    10080
refresh_pattern .      0  20%    4320
acl Safe_ports port 80        # http
acl Safe_ports port 21        # ftp
acl Safe_ports port 443        # https
acl lan src 192.168.10.0/255.255.255.0
#  TAG: http_reply_access
#  TAG: icp_access
#  TAG: header_access
header_access Cache-Control deny all
#  TAG: coredump_dir
- http_port 8080 လို့လုပ်ထားတယ်။ client မှာ သုံးရင် 192.168.10.22 8080 ဆိုပြီးသုံးရမယ်။
- cache_peer 203.81.72.200 parent 80800no-query no-digest - ဒီမှာ parent proxy 203.81.72.200 ကိုထဲ့ထားပါတယ်။ 8080 ကိုယာယီထဲ့ထားပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ပြင်လိုက်ပါ။
<parent proxy မရှိတဲ့ ရန်ကုန် MPT ကသူတွေကတော့ ဒီတစ်လိုင်းလုံး လိုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။>
- acl lan src 192.168.10.0/255.255.255.0 က local ip တွေအတွက် ထဲ့ထားတာပါ။ အကယ်၍ 192.168.10.x ကနေ အခြားဟာကို ပြောင်းမယ်ဆိုရင် ဒီမှာပြင်ရမှာပါ။
9. /etc/squid/squid.conf overwrite လုပ်ပြီးရင် /etc/rc.d/init.d/squid start လုပ်ပါ။
- /etc/rc.d/init.d/squid start ဒါမှမဟုတ် /etc/init.d/squid start မှာရှိမယ်ထင်တယ်။
ကို aTxivG4001 ရေ ကျွန်တော်စမ်း ကြည့်နေတယ်............
အထဲက statement တွေကတော့ တချို့ ဟာ တွေသိပ်မသိဘူး....
ပေးတဲ့အတိုင်း paste လုပ်ပီး စမ်းလိုက်တာ.....နောက်မှ တစ်ခုချင်းစီမေးတော့မယ်.......
/etc/rc.d/squid start မှ ရတယ်ဗျာ................
/etc/rc.d/init.d/squid start အလိုတွေဆိုရင် မတွေ့ဘူး....
clients တွေ လညး် သုံးလို့ ရပီ....ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျို့....
၀င်းဒိုးက routing လုပ်တာထက် ပိုမြန်သလိုပဲဗျ...............
squid proxy server မှာ ISA လိုမျိုး ဟားဒ်ဒစ် ထဲမှာ cache ဖမ်းလို့ရလား....ဥပမာ ...သူများကြည့်ပီးသား ၀က်ဆိုက်ဒ် ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာနောက်လူ လာကြည့်ရင် localhost ကနေပဲ အဒီ၀က်ဆိုက်ဒ် ကို ချပေးချင်တာမျိုးလေ......အမြဲတမ်း active ဖြစ်ရမယ့် ဟာတွေတော့ မပါဘူးပေါ့ ( gtalk, vzo, other....)
အဒီလိုဖမ်းချင်ရင် ဘယ်လို ပြင်ရမှာလညး်.........
ကျေးဇူး aTxivG4001 ရေ.....
Yeah, I see bro, Its depend on Linux Distro.
Yeah, I think so too, in Windows take lots of memory and CPU usage also.
Following is the config for cache size. add to anywhere in squid.conf
pls try to find out best value yourself bro, its depend on your computer memory and power.
#  TAG: cache_mem    (bytes)
#  TAG: maximum_object_size    (bytes)
maximum_object_size 2000 KB
#  TAG: maximum_object_size_in_memory    (bytes)
and all of these are optional, so use the options only when its good for you.
Motherboard intel 945 chipset 775 pin
CPU 3.2 F
အဒါဆို..cache memory ကို တိုးလို့ရမလား.....
4G ဆိုကောင်းကောင်းတိုးလို့ရမှာပါ။ စမ်းတိုးကြည့်လေ။
cache_mem 1GB လောက်ဖြစ်ဖြစ်စမ်းကြည့်ပါလား။ အဲဒီအပိုင်းတော့ လက်တွေ့စမ်းကြည့်မှရမယ်ထင်တယ်။ ကျနော်က အမြဲသုံးနေတာမဟုတ်တော့ ပြောရခက်တယ်။
ကြည့်ပီးသား ဆိုက်တွေ၊ ရှာထားပီးသား...ပုံတွေ စာတွေကိုတော့ ကြည့်ရင် တော်တော်မြန်တယ်......
အခု ဖမ်းတဲ့ cache က memory ပေါ်မှာပဲဖမ်းထားတာလား.......harddisk ပေါ်မှာကောဖမ်းလို့ရလား...ဥပမာ cache လုပ်ထားတဲ့ sites တွေ ကို အချိန်အကန့်အသတ် ၁ ရက်ဆို ၁ ရက် အလိုမျိုးပေါ့.....
cache_mem 1000 MB
maximum_object_size 5000 KB
maximum_object_size_in_memory 8 KB ကျေးဇူး
အင်း။ ရှိတော့ရှိတယ်။ ကျနော်တော့ တကယ့်လက်တွေ့မစမ်းဘူးဘူးဗျ။
ဟာ့ဒစ်ဆိုတော့ တကယ် ပိုမြန်မမြန် မသေချာဘူးနော်။
#  TAG: cache_dir
cache_dir ufs /var/cache/squid 10240 16 256
- ဒီ /var/cache/squid ဖိုလ်ဒါ ဒါမှမဟုတ် /var/spool/squid ဖိုလ်ဒါမရှိရင် ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ဖိုလ်ဒါအရင်ဆောက်ရလိမ့်မယ်။
- 10240 ဆိုတာ MB - its mean 10GB
- 16 256 ကတော့ subdirectory အရေအတွက်လို့ပြောတယ်။
/var/cache/squid ဆိုတာတော့ရှိတယ် အခု ညတော့ အဒါကို ဖြည့်ပီး စမ်းထားလိုက်ဦး မယ်
ပေးထားတဲ့...ဂဏန်းတွေထည့် ပီး အခုတော့ run ကြည့်နေတယ်........သုံးတာ ကြာမှ ပိုသိသာမယ်ထင်တယ်......
ဟုတ်ကဲ့။ your welcome ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ
ကို မာ့ခ် ရေ အိုကေတယ်.....အွန်လိုင်းနဲ့ ခဏ အဆက်ပြတ်သွားလို့....ဗျို့....
မနေ့က စမ်းတာ ည ကျွန်တော်computer ပိတ်တော့.....squid ကို stop လုပ်တဲ့ command ရိုက်တော့....
WARNING cache_mem is larger t han total disk cache space! - waitaminute or two... done
ကျွန်တော်ထင်တာ က ကျွန်တော် cache ဖမ်းထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ hardisk space နည်းနေလို့ထင်တယ်ဗျာ.....အဒါနဲ့ ပြောင်းကြည့်ထားတယ်.......ကျန်တာတွေတော့ အားလုံး အိုကေတယ်......
အင်း ဟုတ်မယ်ထင်တယ်။ နဲနဲ adjust လုပ်ကြည့်ရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တော့ cache_dir ကြောင့်လို့ထင်တယ်။
အဆင်မပြေရင် ပြန်ဖြုတ်ပြီးစမ်းကြည့်လေ။ squid က အဒီcommand မရှိလဲ automatic disk ပေါ်မှာ save လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။ အရမ်းတော့ မသေချာဘူး။
ကျွန်တော်တို့ အခုသုံးတာက parent proxy ကို သုံးတော့ အခုတိုင်း အိုကေတယ်...
တကယ်လို့ direct proxy ဆိုရင် cache peer မှာဘယ်လို ပြောင်းရေးရမလည်း......
ရှာကြည့်တော့ always_direct ဆိုတာရယ်.....never_direct ဆိုတာတော့တွေ့တယ်
always_direct allow|deny all
never_direct allow|deny all
အပေါ် statement တွေမှာကောဘာပြင်ဖို့လိုသေးလညး်.....
direct proxy ဆိုတာ ဆာဗာမှာ proxy မခံပဲ internet သုံးလို့ရတာကို ပြောတာမလား။
ဒီ ၂ လိုင်းလုံးဖြုတ်လိုက်ပါ။ ရပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်တယ်တကယ်လို့.....203.81.72.200 မလိုတော့ပဲ direct connection to the internet နဲ့ သုံးရင်ကိုပြောတာပါ အဒါဆိုရင်လည်း အဒီ့ နှစ်ကြောင်းကိုဖျက်လိုက်ရင်ရပီလား.....
Squid မှာ Network Load Balancing (NLB) လုပ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆီမှာ အင်တာနက်လိုင်း ၂လိုင်းရှိတယ်။ အကောင်းဆုံ ဖြစ်မဲ့ setting လေးကို ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျား။ NLB က inbound,outbound ၂ခုလုံးကိုလုပ်ချင်တာပါ။
July 2008 edited July 2008 Registered Users
Windows Server V.S Linux Server
July 2008 edited July 2008 Moderators
If you asking me, Answer is No.
1. I dont interest Microsoft.
2. Your question is too General and wide range, and I am not Documenter,
3. I only know & interest practical way, no concept, no theory, and dont like to copy and paste from somewhere of coz.
Squid is the web proxy
i think that he asked for the gateway proxy
Those tools are cool
infofreakz wrote: »
that problem was solved bro, it was squid.
kindly read the whole thread.
အဲဒီ squid ဆိုတာကြီးက ဘယ် Linux distro ဖြစ်ဖြစ်ရလား... server ဖြစ်ဖြစ် desktop ဖြစ်ဖြစ် ရလား..
အဓိက ကတော့ Ubuntu desktop မှာပေါ့... အဲဒီမှာ install လို့ ရလားဗျ...
ကျွန်တော်က MPT user ပါ.. ကျွန်တော်တို့က modem ကို username password နဲ့ Login ၀င်ရပါတယ်.. အဲဒါဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်က အခုမှ ကိုMark နဲ့ ကိုtayzar.light တို့ ပြောထားတာတွေကြည့်ပြီးစမ်းကြည့်ချင်လို့ပါ..ပြောပေးပါဦး
Solid wrote: »
အတူတူပဲ ကိုဆောလစ် ရေ.. ကိုတေဇာ ကလည်း mpt user ပဲလေ 203.81.72.200 ဆိုတာ ygncache.mpt.net.mm ရဲ့ ip address ပါအကို
proxy ထားခြင်း မထားခြင်း၊ proxy software တူခြင်း မတူခြင်း ပဲကွာတာပါ
Login ဝင်တာကတော့ အားလုံးဒီပုံစံပါပဲ..
adsl software လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ web browser မှာ mptadsl.net.mm (or) 172.24.0.3 ကို ဝင်ပီး..
authentication လုပ်တာ အားလုံးပုံံစံတူတူပါပဲ..:67:
ubuntu မှာရော squid ကို ဘယ်လို Install လုပ်ရမလဲဟင်.. လုပ်ကြပါဦး သား ubuntu တင်လိုက် ပြီးသူတို့ပြောသလိုလုပ်တာ ရ၀ူး.. (:(( yum ဆိုတဲ့ command ကို သိဘူးတဲ့ဗျာ
yum ကို Fedora မှာ သုံးပါတယ်၊ apt ကို Ubuntu မှာ သုံးပါတယ်။
squaid ကို ubuntu မှာ install လုပ်မယ်ဆိုရင် ..
ကျနော်တော့ မလိုအပ်လို့ အဲဒီဟာကို မဖတ်ထားပါဘူး .. ဒီအောက်ကလင့်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ conf နဲ့ တစ်ထပ်တည်းတူချင်မှာတူမယ်။ ကိုယ့်ဟာကို သင့်တော်သလို customize လုပ်ပါ။
ဒီ post ကိုမေးတဲ့သူကော ဖြေတဲ့ bro ကော (aTxIvG4001) အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း Linux ကိုခုမှစလေ့လာနေတာ။ ဒီ post ကကျွန်တော်လိုချင်တာနဲ့ ကွက်တိပဲ
ကို aTxIvG4001 အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် config မှာပြင်တာ ဘယ် line ကဘာကိုဆိုလိိုတာလဲ နည်းနည်း ရှင်းပြပေးပါလား။ အဲဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ပိုအဆင်ပြေလို့ပါ မှတ်ဖို့။:D
Load Balance လုပ်တာလေးလဲ ပြောပြပေးပါလား။ မျှော်နေမယ်။
နောက်ပြီး squid နဲ့ bandwidth ကို လိုသလို Limit လုပ်လို့ရတယ်ကြားဘူးတယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်က fedora9ကို သုံးပါတယ်။ rpm တွေ ကို download လုပ်တော့ fedora9 အတွက်တစ်ချို့ကရပါတယ်။ တစ်ချို့က Fedora core 1 (or)2(or)3ဆိုပြီး core နာမည်နဲ့ ပေးပါတယ်။ Fedora9 အတွက် core ဘယ်လောက်ကို download လုပ်ရမလဲ မသိလို့ပါ။
Admin ရေ ... အခု ကျွန်တော့ account ကသုံးမရလို့ ညီမ account ကိုသုံးနေရတယ်
account က username password မှားတယ်ပဲ ပြောနေတယ်။ မမှားဘဲနဲ့။ (
password reset လုပ်လည်း မရပါ။ reset လုပ်ရင် အားလုံး ok ပါတယ်။ but password ကတော့ပြောင်းမသွားပါ။ ကူပါဦး။
username က blueviruz5 ပါ။:((
can you explain more about linux networking especially for isa servers,file permission and link forwarding.
February 2009 edited February 2009 Registered Users
အခု ကွျွန်တော် Server2003 ပေါ်မှာ squid ကို run ထားပါတယ်..
ဘာတွေမှားနေလဲတော့မသိဘူး.. inetenet တော့ရတယ်ဗျ
ssl site တွေတက်ဘူး
windows မှာ service အနေနဲ့လဲမတက်ဘူး
config file ကို ဒီမှာ upload လုပ်ပေးထားပါတယ်
February 2009 edited February 2009 Moderators
လင်းနစ်တွေမှာ ISA လို proxy server software တွေရှိလားခင်ဗျားလင်းနစ် server က နေ clients တွေကို internet share လုပ်ချင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့...ကျေးဇူးပြုပီး ဖြေပေးကြပါခင်ဗျား.............:106:
အခု ကျွန်တော့ရဲ့ squid မှာ IP တွေကို range နဲ့ internet access ပေးချင်တယ်ဗျာ..
ဥပမာ. 192.168.0.1 to 20 ကိုတော့ ineternet ပေးသုံးမယ်
21 and above ကိုတော့မပေးဘူးဗျာ.. အဲသလိုမျိုးလုပ်လို့ရလား။။
နောက်ပြီး Internet ၂ လိုင်းရှိတယ်ဗျာ အဲဒါကိုလဲ load balancing လုပ်ချင်တယ်..
ဆရာ့ ဆရာတို့ ပြောပေးကြပါဦးဗျာ..
(မေးပါများ ပညာရ. ဇြေပါများလက်ညောင်းတဲ့ )
I would like to know how to QOS with iptables firewall and Bandwidth limiting with SQuid Server.To say the truth , I dont hv chance to test at the moment. But i read this thread and I think you can show me way how to do that.
I appreciate your Opensource Mind!!!
I love OpenSource!!!
December 2009 edited December 2009 Registered Users
/etc/squid/squid.conf (Squid Configuration File)
acl lan src 192.168.0.0/255.255.255.0 ဒီနေရာမှာ ကန့်သတ်ပါ။
LB အတွက် NIC3card လိုပါလိမ့်မယ်။
ကျနော် RHL9နဲ့ VMware မှာစမ်းတာ ရပါတယ်။
MPT ၁လိုင်း နဲ့ Local Web Server (MS Server 2003 with IIS) နဲ့စမ်းတာပါ။
Routing အတွက် Conf တွေလုပ်ရပါမယ်။
Load Balancing အတွက်အောက်က Link ကိုကြည့်ပါ။
http://lartc.org/lartc.html#LARTC.RPDB.MULTIPLE-LINKS (For 2WAN Load Balancing)
February 2010 edited February 2010 Registered Users
စိတ်၀င်စားတယ်ဗျာ ကွှျန်တော် ကမန်းတလေးက MPT Login နဲ့၀င်ရတဲ့ MPT user ပါ ကွှျန်တော် squid.conf မှာဘာတွေပြင်ရမလည်း ပြီးတော့ wan card ရော Lan card ရော ရှိတယ်ဗျာ wan ကြိုးထိုးထားတယ် ဒါပေမဲ့ TCP / IP Properties မှာဘာတွေ၀င်ပြင်ရမအုန်းမှာလည်း ကော်နက်ရှင်မတတ်ဘူးဗျာ့ လုပ်ကျပါအုန်း wan မှာဘာထည့်ရမှာလည်း Lan မှာရောဘာထည့်ရမှာလည်း ... ၀ါးးးးးးးးးးးး ကယ်ကြပါအုန်း
WAN IP: 172.24.72.138
Primary DNS: 203.81.64.20
Secondary DNS: 172.24.0.3 အဲဒါတွေဘဲဗျာ ပြင်ပြီးသား squid.conf လေးတင်ပေးကျပါ့လား ပြီးတော့ TCP / IP Properties မှာဘာတွေ၀င်ပြင်ရမအုန်းမှာလည်း အဲဒါလည်းပြောပြကျအုန်းနော် Lan မှာဘာထည့်ရမှာလည်း Wan မှာဘာထည့်ရမှာလည်း လုပ်ကျပါဗျာ ကလိတာများသွားလို ့ဆိုင်ပိတ်ထားရတယ် မြန်မြန်လေးနော်
ကျွန်တော့် MPTလိုင်းမှာ squid နဲ့proxy server လုပ်ကြည့်တာ ဆာဗာက နေ 172.24.0.3 ကို ping လို့ရတယ်ဗျ ဒါပေမဲ့ username နဲ့ password ကိုဘယ်
် ကွှျန်တော် MPT (India Line) သုံးနေပါတယ် မိုဒမ်းကို password နဲ ့၀င်ရပါတယ် router သုံးနေတာအဆင်မပြေလို့Linux လေးကိုယ်တိုင်တင်ပြီးစမ်းသုံးကြည့်မလို ့ပါ နည်းနည်းလမ်းညွှန်ကျပါအုန်း ဗျာ Wan Card ရော Lan Card ရောဆိုဒ်ပြီးပါပြီ Modern ကထွက်တဲ့ကြိုးကို WanCard မှာထိုးထားတယ် LanCard ကကြိုးကို Switch မှာထိုးထားတယ် ဗျာ . . windows server 2003 လည်းတင်ပြီးပါပြီ ကွှျန်တော်မရှင်းတဲ့နေရာကစမေးပါတော့မယ် ဒီလို ပါ ဒီနေရာလေးတွေမှာ ဘာဖြည့်ရမှာလည်းဗျာ ... ( ကွှျန်တော်အဲဒီနေရာကစပြီးနားမလည်တော့တာပါဘဲ ) ဆရာကြီးတွေကယ်ကြပါအုန်း ကွှျန်တော် အိုင်ပီတွေကအပေါ်ကဟာတွေပါ Attachment not found.